धर्म संस्कृति र यसको महत्व
अक्टोबर 24, 2018 अक्टोबर 30, 2018 साइन्स इन्फोटेक	14 Comments डा. राम बहादुर बोहरा, धर्म संस्कृति
धर्म संस्कृतिले एक आपसमा हरेक नेपालीलाई जोड्ने ठूलो भूमिका खेलेको छ । आज हामीले धर्म संस्कृति लत्याउदै छौं यो नितान्त गलत छ । नेपालीहरुको महान् चाड विजया दशैं हामीले विदा गरेका छौं । धर्म संस्कृति हरेकले आ-आफ्नै हिसावले मान्ने गरिन्छ । नेपाल विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र थियो र आज पनि हरेकले मान्दै आएका छन् यसमा दुईमत छैन ।
शक्तिको विजय निश्चित हुन्छ यसमा दुइमत छैन् जहाँ विश्वास छ त्यहाँ शक्ति अवश्य छ । संस्कृति भनेको जीवन पद्दति हो । परम्परादेखि चलिआएका मूल्यहरूको संग्रह हो । संस्कृति भनेको मानिसले समाजमा बाँच्ने, समूहवद्ध जीवन व्यतित गर्ने प्रबन्धन हो । संस्कार जन्माउने, हुर्काउने र त्यो अनुसार जीवन निर्वाह गर्ने उपक्रम संस्कृति हो ।
अब सवाल उठ्छ कि नेपाली संस्कति भनेको के हो ? नेपाली संस्कृति नेपाल राष्ट्रका विभिन्न भागमा सदियौंदेखि चलिआएका रीतिरिवाज, परम्परा, धर्म, संस्कृति, विभिन्न भाषा, भाषिका, सामुहिक जीवनपद्दति, नाचगान, मनोरञ्जन, लूगाफाटो, खानपिन, उठबस, सुत्नु सबै क्रियाहरू र अर्काे शब्दमा जीवन पद्दति नै संस्कृति हो ।
बिहानपख आमाहरूले तुलसीको विरुवामा पानी चढाउनु, वरपिपलमा पानी दिनु र रात्रीमा दिप विसर्जन गर्नुसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू संस्कृति अन्तर्गत आउँछ । कुनै पनि देशको धर्म, संस्कृति, परम्परा त्यो देशको प्राण हो, आत्मा हो । जलवायु, भौगोलिक समानता, राजनीतिक व्यवस्थामा समानता एकजस्ता भएपनि एउटा राष्ट्र अर्काे राष्ट्रसँग संस्कृतिको विषयमा मात्रै फरक हुन्छ । अन्यथा सबै देशका चाहना भने एकनासका नै हुन्छन् ।
संस्कृति र धर्म रक्षाको लागि मृत्यु समेत हुने गरेका छन् । त्यो देशको सीमानाभित्र बसोबास गर्ने नागरिकहरूको सांस्कृतिक पक्षलाई सुरक्षित राख्नको लागि अर्थात् राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्नको लागि सेनाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । राष्ट्रियताको रक्षा भनेकै स्वधर्म, स्वसंस्कृतिप्रति समर्पण, प्रेमभाव र लगाव हुनु हो । व्यक्तिको विचारधाराजस्तै राष्ट्रको पनि विचारधारा हुन्छ । त्यो विचारधारा संस्कृति नै हो ।
नवोदित अथवा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको संविधानमा कानून र व्यवहारमा धर्म परिवर्तनको व्यवस्था गर्न लगाई युरोपियन युनियन त्यही चर्चको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै यी देशहरूमा धर्म परिवर्तन गराउँदछ । धर्मलाई उनीहरूले सत्ताको प्रतिक मान्दै आएका छन् । जवकी नेपाली मानसिकता वा हिन्दू मानसिकता भनेको मानवताको हित गर्नु, दया, करुणा, परोपकारी भावना राख्नु, कसैको पनि अहित नचिताउनु नै हुन्छ ।
*यो लेखकको निजी नितान्त विचार हो ।
जीवनमा नीतिधर्मको आवश्यकता
← स्वस्थ रहौं अरूलाई स्वस्थ रहन आग्रह गरौं
देश कता गई रहेको छ ? →
जण्डिस र यसको उपचार
सेप्टेम्बर 20, 2018 सेप्टेम्बर 20, 2018 साइन्स इन्फोटेक 6
जुलाई 9, 2019 जुलाई 9, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0
14 thoughts on “धर्म संस्कृति र यसको महत्व”
Pingback:देश कता गइरहेको छ ? – Science Infotech
Pingback:धर्म संस्कृति किन आवश्यक छ ? – Science Infotech
Pingback:नेपालमा बलात्कार किन बढ्दैछ ? – Science Infotech
Pingback:के लोभ मृत्युको कारण बन्न सक्छ ? – Science Infotech
Pingback:धर्म संस्कृति के हो ?
Pingback:नेपाली धर्म संस्कृति, राजनीति र समाज कता गई रहेको छ ?
Pingback:के हो धर्म संस्कृति भन्ने कुरा रामरी बुझौ ?
Pingback:सनातन धर्म संस्कृतिको अवमुल्यन गर्नेले एकपटक सोच्ने कि ?
Pingback:मानव धर्म भनेको के हो ?
Pingback:सम्पुर्ण युवाहरु सत्कार्यमा लागौ
Pingback:चलिआएका परम्परा नमासौं
Pingback:भएको छ परिवर्तन
Pingback:जन्म दिन किन मनाउने ?
Pingback:यस्तो छ यज्ञसंग जोडिएको वैज्ञानिक रहस्य, थाहा पाईराख्नुहोस्
फापरको रोटी खानुका फाइदाहरु
स्वास्थ्यको लागि माछा खानुका फाइदाहरु
मानव स्वास्थ्यको लागि काफल खानुका फाइदाहरु